Nambarada taleefanka ee iskuxirayaasha - khatar xagga amniga ah?
Nambarada Taleefanka ee iskuxirayaasha - Khatar Amni?10
Dhowr toddobaad ka hor waxaan ka warbixiyay sida aad ugu awoodsiin karto martidaada inay ku furaan barnaamijka taleefanka aaladaha moobaylka adoo garaacaya lambar taleefan. Hadda suurtagal ayaa soo baxday in si aan macquul ahayn loo xakameeyo kaarka SIM ama dib loogu celiyo qalabka goobaha warshadaha iyada oo aan wax tallaabo ah laga qaadin dhinaca isticmaalaha.
Adeegsiga xiriiriyeyaal gaar ah oo ku dhuumaaleysanaya meel walba sidoo kalena si otomaatig ah loogu yeeri karo (forums, emails, SMS, QR codes), PIN aan sax ahayn ama PUK ayaa la geliyaa dhowr jeer qeyb yar oo ilbiriqsi ah. Tani waxay si aan macquul ahayn u xannibi doontaa kaarka SIM-ka. Tan waxaa lagu gaarayaa iyadoo la adeegsanayo lambarrada xakamaynta ee sida caadiga ah ay tahay in gacanta lagu geliyo iyadoo la adeegsanayo badhanka barnaamijka lambarka.
Jilicsanaanta ayaa saameyn ku leh nidaamka hawlgalka Android ee Google illaa iyo ay ka mid yihiin Ice Cream Sandwich (nooca 4.0.x) - xalka software-ka ee dhibaatada qaabka qaabka cusbooneysiinta hawlgalka ayaa u dhow wax aan macquul aheyn taleefannada gacanta badan (iyada oo ay ugu wacan tahay siyaasadda cusbooneysiinta soo saaraha!). Taabadalkeed, waa inaad ubadashaa barnaamijyada sida G Data USSD Filter , oo aad si bilaash ah uga heli karto suuqa Android.